Kedu ihe na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye, na-akwado ya ma na-abanye ugboro abụọ? | Martech Zone
Fraịde, Septemba 9, 2016 Fraịde, Septemba 9, 2016 Douglas Karr
N'agbanyeghị ụdị ozi izi ozi ị na-eme, ị ga-enye usoro maka onye debanyere aha ịbanye na ozi ndị ahụ. Ọtụtụ mba na amụma azụmaahịa na-akwado ụdị ụfọdụ iwu mgbochi spam, ya mere idekọ isi mmalite na omume nke omume dị oke egwu. Ndị a bụ usoro:
Nwepu Otu - Nke a bụ ahụkarị usoro maka ozi email na ederede opt-ins. Onye debanyere aha ahụ debanyere aha na saịtị ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-ebubata ya na ikpo okwu izi ozi. Uru otu opt-in dị na mfe ya, achọghị ka mmekọrịta ọzọ. Ọdịda nke nwepu aha otu bụ na ụdị gị nwere ike ịdabere na adreesị ọnyà spam na-akpaghị aka na ndepụta gị. Nwere ike ịchọta ozi ịntanetị gị egbochiri n'okporo ụzọ. Uru otu opt-in bụ na ndị ọrụ na-ahọrọkarị maka ndenye aha mana ha agaghị ewere usoro ọzọ na usoro opt-in abụọ.
Nwepu aha otu na nkwenye - Nke a bụ usoro kachasị mma maka ndenye aha nnabata ozi ma na-elegharakarị anya. Ozi nnabata mara mma nke na-egosi na onye debanyere aha abanyela ma setịpụ atụmanya maka oge ole a ga-eziga ozi yana uru ha ga-eweta onye debanyere aha bụ atụmatụ dị ukwuu.
Ugboro abụọ Nwepu-Na - All nyiwe ozi nyiwe chọrọ ka ị jiri usoro a n'ihi na ọ na-ebelata ihe egwu ọ bụla nke mkpesa spam. Onye debanyere aha ya na-abanye na otu ụdị, mbubata, ma ọ bụ ozi ederede. Nke a na - esote ozi ozigbo iji kwado opt-in. Ọ bụrụ na ọ bụ email, ha ga-pịa njikọ dị na email ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụ ozi ederede, ha ga-azaghachi nkwenye na ha na ịbanye.
E nwekwara ụfọdụ akparamaagwa metụtara na abụọ nwepu aha na:
Ntughari uzo abuo na-agbado isi na usoro nnabata, a nke bụ isi iwu nke mmadụ akparamaagwa nke ahụ kwuru n'ọtụtụ ọnọdụ mmekọrịta ọha na eze, anyị na-eweghachi ihe anyị nwetara n'aka ndị ọzọ. Malite mmekọrịta ahụ site n'igosi na ị na-asọpụrụ onye ahụ - na adreesị ozi-e ha nyere gị - ma ị setịpụrụ onwe gị maka nloghachi na nkwụghachi ụgwọ na ọnụego emeghe.
Ihe omuma a sitere na Salesforce, Otu Psychology nwere ike isi mee ka ozi-e gi karia, na-agagharị site na ụdị ọpụpụ ọ bụla ma na-atụle ụzọ isi hazie ahụmịhe email gị ịbawanye njikọ aka ma belata ndị na-edeghị aha na akụkọ SPAM. Ọ na-ejikọkwa ahaziri iche ma na-ebuli usoro isiokwu maka itinyekwu aka.
Tags: inyochapụ nkwenyennweta abụọ na-abanyeotu opt-ingịnị bụ ozi nkwenyegịnị bụ opt-ingịnị bụ otu opt-in
Etu ị ga-esi họrọ ụlọ ọrụ ekwentị eji eme ihe ziri ezi